Yakajairwa Chrome Wiricheya - Dhiraivha Chrome Sachigaro
Rudzi rwechigaro urwu nderwechinyakare wiricheya yemawoko; kazhinji inorema uye haina kunyatsogadzikana. Kana iwe uri kutsvaga kutenga yakajairwa chrome cheya, ipapo unogona kutarisa mamwe edu wheelchair yakajairwa chikamu mamodheru kuti uone kana achienderana nezvinodiwa zvako zvekutanga.
Macheya echrome akajairwa anogadzirwa nesimbi nekuda kweichi chikonzero anowanzo kurema kune wepakati munhu.
Zvipatara nedzimwe nzvimbo
Aya marudzi emacheya anga ari iwo anonyanya kushandiswa mhando yemidziyo kana zvasvika kune mavhiripu; izvi imhaka yekuti iwo anodhura uye ari nyore kuwana. Mabhizimusi mazhinji eruzhinji neakazvimiririra kana zvivakwa zvinoshandisa aya marudzi ezvigaro nekuti murwere anongoda kuzvishandisa kwenguva pfupi.
Hazvikurudzirwi kushandisa rudzi urwu rwechigaro kwenguva refu. Zviri nani kana iwe ukatenga a wiricheya izvo zvinonyanya kusununguka uye kureruka muhuremu.
Iyo poindi yemitengo yemhando idzi dzemacheya inowanzo kuve yakadzika kwazvo uye pamwe mune yakaderera zana's. Kana iwe uchitsvaga chimwe chinhu chinodhura zvakanyanya uye usine hanya nenyaya yekuti zvigaro izvi hazvina kugadzikana uye zvinorema, saka unofanirwa kutarisa online kumutengesi kana unogona kushanyira "Standard" yedu wiricheya chikamu kune rumwe ruzivo.